Mapurisa nevanyori. 4 mazita ekuziva | Zvazvino Zvinyorwa
Mapurisa nevanyori. 4 mazita ekuziva
Mapurisa. Ivo vanga kana vachiri uye rimwe zuva vakasiya dombo, migwagwa uye vanonyengera uye vakatanga kunyora nezvavo, nezve nyika dzavo. Kune zvakawanda zvimwe, asi nhasi tinogara neaya Mazita makumi mashanu. Zvinobva mukurumbira wepasi rese, vanokunda mibairo yakakosha, nenyaya uye mabhuku ebudiriro akashandurwa mumitauro yakati wandei.
Ivo ndivo british Clare mackintosh, vaFrance Olivier Norek uye vanhu veBarcelona Marc Mufundisi y Victor weMuti. Ndiwo mazita ake ekupedzisira akaburitswa. Iyo inobva kuDel Arbol ichave iri kunze kwaGunyana 19. Saka ngatitarisei kuti vaive vanaani uye ndivanaani.
3 Marc Mufundisi
4 Victor weMuti
Uyu mukadzi wechiChirungu anobva kuBristol basa makore gumi nemaviri ari mupurisa, mu department re kuferefetwa kwemhosva, semukuru. Akaisiya muna 2011 kuti ave mutori wenhau freelance uye wezvemagariro media consultant. Nhoroondo yake yekutanga yaive Ndinokurega uende, iyo yakakurumidza kutsoropodza uye inotengesa zvakanyanya. Uye nemusoro mutsva uyu, Ndiri kukutarisa, dzoka ku chinonakidza chepfungwa.
Zvinyorwa. Kubva husiku kusvika masikati kuvapo kwe Jenna grey inoshanduka kuita hope dzehusiku. Chido chako chete ikozvino tiza kutanga hupenyu hutsva kure nezvose. Inopedzisira yasvika Wales kwaanoroja imba diki achitarisira kuwana nzira yekukanganwa ipapo.
Zvishoma nezvishoma Jenna anotanga kuona a ramangwana. Nekudaro, iye anofanirwa kusangana nekutya kwake, kusuwa kukuru uye ndangariro dzehusiku hwaNovember husiku hwakashandura hupenyu hwake zvachose.
Uye ndezvekuti hapana munhu anogona kutiza kubva kune zvakapfuura uye mune zvaJenna izvo zvakapfuura zvava kuda kudzoka.
Akazvarirwa mukati Toulouse, uyu 42-gore-okuberekwa wechiFrench aive wekupedzisira Kukadzi muBCNegra achiratidza Domino mhedzisiro. Iri bhuku iro iro 2016 Noir Novel Mubairo uye izvo zvakamusimbisa iye seimwe remazita makuru pane nhema nzvimbo muFrance.
Kaputeni musiki Victor mutengo, wake alter ego, Norek aive mapurisa kwemakore gumi nemashanu mu iyo Seine-Saint-Denis dunhu, nharaunda yeParis ine huwandu hwakawanda hwematsotsi, kushaya basa uye kutama. Makore mashoma apfuura akakumbira iyo siya ndokutanga kunyora. Domino mhedzisiro ndiyo kesi yechitatu yaCoste.
Zvinyorwa. Kune imprudence iro jaya Nano Mosconi inopera muna jeri naMarveil. Anotya uye apererwa, anobvunza hanzvadzi yake Alex kuti aite chero chinotora kuti abude imomo. Iye anoisa kumanikidza kugweta remhuri, uyo anotsvaga chirongwa chinoshamisa chingashande.
Zvichakadaro, mune sub-dhairekitori remapurisa ezvekutongwa wedhipatimendi reSena-Saint-Denis, anonyanyo kuzivikanwa se SDPJ93, Kaputeni Victor Coste nechikwata chake vanogamuchira chiziviso chekubiwa kwemukomana mudiki.
Mhosva mbiri dzisingaenderani dzinozoburitsa humambo nemhedzisiro isingaonekwe.
Mutsotsi uye munyori wechiCatalan, Mufundisi anoshandira mapurisa esainzi eMossos d'Esquadra. Kubva munaKurume wegore rino anga ari mumugwagwa Farishta, bhuku rake rechishanu uye chikamu chechipiri cheinonzi "trilogy yezvitsuwa" iyo yekutanga zita iri Bioko.
Zvakare munaKurume taigona kuzviona mu Kosmopolis kugovana munyori-kune-munyori kutaura uye kuvanzika naJo Nesbo.
Zvinyorwa. Farishta izita remusikana Nherera yeAfghan, kuti mushure mekurasikirwa nevabereki vake vokurera uye atova mukuyaruka, anoenda kunoshanda mune imwe nzvimbo yekushanya yekushanya pane zvimwe zviwi muFrench Polynesia. Ikoko anoshandira mhuri dzinogara dzese pachitsuwa chidiki.
Panguva imwechete inorarama nyaya yerudo Nenhungamiro yeiyo yakaoma, uye edza kutsvaga zvakavanzika zvakachengetwa nenzvimbo. Sei mhuri idzi dzichigara imomo, dzichibviswa pasirese? Chii chakaitika kuvasikana vaive pane yako post kare? Zvese apo mumwe munhu achinyangira.
Pamwe izita rinozivikanwa kupfuura mamwe mana. Uyu aimbove mosso d'esquadra ane rakabudirira basa semunyori we Kusuruvara kwemasamura, Mamiriyoni anodonhedza kana iye anokunda weNadal Prize 2016, Manheru ezvinenge zvese.
Del Arbol ichaburitsa inova nyowani munaGunyana, Pamusoro pemvura, uye iye pachake aive nebasa rekuzvizivisa pane yake Facebook nhoroondo. Saka, tsanangura iri bhuku idzva se
una inoverengeka nezve zvazvinoreva kurarama.
Kana kuti akataura mumuromo waMiguel, protagonist wakea: "Tinoshandisa nguva yakawanda tichishanda kuti tirarame zvekuti tinokanganwa kurarama."
Zvakanaka, isu tichaona nezvino nyowani nyaya inotishamisa, kunyange hazvo maitiro ake, akanyanya uye akaumbwa, haadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Mapurisa nevanyori. 4 mazita ekuziva
Pazuva iri Johanna Spyri akazvarwa, musiki waHeidi